Usavimba nemakore. Tekinoroji inoparadza sei ramangwana | Linux Vakapindwa muropa
"Ivo vakavimbika se50s yechishanu-ruoko Fiat" Mutsara uyu unoreva zvishandiso zvegore-zvakabatana uye hazvina kutaurwa nemumwe munhu kuFree Software Foundation. Inobva ku chinyorwa rakabudiswa neMagetsi Injiniya Zvinyorwa.
Gore raive shanduko yechisikirwo yemakomputa indasitiri.ku. Iine simba rekugadzirisa richidhura uye kumhanya kwekubatanidza kuchikura, zvaive zvine musoro kuburitsa kunze kwekuchengetedza uye chirongwa chekuitwa Mushure mezvose, hatichatori mvura murwizi, uye hatina jenareta yemagetsi kuseri kwemba.
1 Usavimba nemakore
2 Muenzaniso unokundikana
Iko kuunganidzwa kwakaitwa nemutori wenhau kunotyisa:
Mwedzi wekupedzisira wegore rapfuura (2020) Google yakasiya zviuru nezviuru zvevashandisi kwemaawas kubva kuGmail, Google Docs, YouTube, Hangouts, Analytics, Google Mepu, Blogger uye mamwe ese masevhisi.
Kuti urege kuva mushoma, Microsoft yakavhara vashandisi veOptlook kaviri mukati memwedzi mitatu. Pane imwe nguva yaive nekuda kweyakaipa software yekuvandudza.
Uye vatatu vakapedziswa neAmazon izvo nekuda kwezvikonzero izvo zvisingazivikanwe yakave nekuparara kweWebhu Services yako kukuvadza pakati pevamwe Adobe, Roku, Flickr, Autodesk, iRobot nemamwe makambani makuru kusanganisira akasiyana midhiya.
Nest kuchengetedza makamera (Imba yeGoogle) inoda kubatana kune gore kuti ishande. Sekureva kwemunyori, maseva egore avanoshandisa anoenda pasi kazhinji, izvo zvinoita kuti vave chishongo chinodhura..
Uye kutaura nezvedendere, rimwe basa reGoogle rakamiswa nekambani yaive Nest Yakachengeteka. Yakanga iri alarm yekumba ine maseru sensors uye hub iyo inogona kukiyiwa uye kukiyiwa neiyo NFC tag kana yeApple app. Iyo Hardware yaiwanikwa kubva pamadhora mazana mashanu, uye iwe unogona kusarudza kunyoreswa kwegore rose mumatanho emadhora makumi matanhatu kusvika $ 500 Chinhu ndechekuti Nest Yakachengeteka Hardware haienderane neyeye mumwe mupi.
Nucleus inogadzira Android-yakavakirwa pamadziro mapiritsi ayo anoshanda seyemba intercom uye tsamba yekuzivisa Imwe nguva vatenga zvigadzirwa zvavo, vakamira kuve nemashandiro uye kambani yakazivisa vashandisi kuti kana vachida kuitora, vanofanirwa kubhadhara kukwidziridzwa.
Panyaya yemitambo yekunyorera, akataura maviri akanyanyisa; Kuparara (mutambo wevazhinji wehondo wakatora mwedzi mishanu) uye Farmville, asi mune iyi nyaya dambudziko nderekuti yaive yakavakirwa paFlash uye hapasisina rutsigiro.
Ini ndoda kumira pane chete kutaura pane chinyorwa chatiri kudoma nekuti zvinoita sekunge kwandiri zvinorova moyo wedambudziko.
… Zvinoita sekuti mamwe emakambani aya ane mainjiniya epadiki ari kutarisira imba inochengeterwa vakwegura. Kungoti nekuti mumwe mukomana ishasha, hazvireve kuti vanoshandisa zvehunyanzvi maitiro, senge, oh ini handizive, kunyatsoyedza kodhi vasati vaisa, semuenzaniso.
Maererano ne Wikipedia
… The Minimum Viable Product (MVP) chigadzirwa chine zvinhu zvinokwana kugutsa vatengi vekutanga, uye nekupa mhinduro yekusimudzira kweramangwana. . Kugoneka zvinoreva kuti unogona kuitengesa. ”1
Kudzidza kubva kuMVP kazhinji kunodhura pane kugadzira chigadzirwa chine zvimwe zvinhu, izvo zvinowedzera mutengo uye njodzi kana chigadzirwa chikatadza, semuenzaniso nekuda kwekufungidzira kusiri iko
Eiye chinogoneka chigadzirwa ndicho hwaro hwebhizimusi chimiro chakabuda mukutanga kwezana ramakumi maviri nemasere, kutanga kana kambani yekutanga. Chinangwa chemakambani aya kukura nekukurumidza.
Asi, iyo modhi iri kuramba ichingobvunzwa Nekuti kwete chete, muzviitiko zvakawanda ivo havagone kuburitsa kukosha kwevanogoverana (kunyangwe vachiwana mamirioni emari), ivo vanonayawo nezvichemo nezve mamiriro ekushanda uye, sezvatakaratidza pamusoro, havana hanya nehunhu kana kuhwina mutengi kuvimbika.
Nokudaro, Kusvikira mhando yevanopa sevhisi ichivandudzika, zviri nani kuti usavimba makore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Usavimba nemakore. How Tech Inoparadza Ramangwana
Handina kumbofarira pfungwa yegore komputa, zvinoita sekunge kwandiri iko kudzosera kumashure, kudzokera kumatopota ekupedzisira ema70's. Sezvo ini pandakawana P2P maratidziro makumi emakumi emakore apfuura, ndanga ndiri mutsigiri akasimba wekuparadzirwa / kwakatemerwa komputa (pamusoro pezvo, inoderedza njodzi yekuferefetwa). Kana ini ndichigona kuchengeta yangu data yakachengeteka pane yangu yega Hardware, nei uchiipa kune wechitatu bato?
Iniwo handifarire mutengi / server modhi zvakanyanya, uye ndinofunga zvingave zvirinani kuverengera wega komputa (pamwe makambani anodikanwa kuve nechero nhanho yepakati.